Iziphumo ze-Instagram kwishishini lokutya ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iziphumo ze-Instagram kwishishini lokutya
NgoJanuwari 3, 2019 0 IiCententarios 652
Wonke umntu uthanda ukujonga iifoto. Nokuba ziifoto zendalo okanye zasendle, iifoto zosapho kunye nezihlobo, amava okupheka, okanye iifoto zeziganeko zolonwabo, abantu bayakonwabela ukuhlala ngokuzonwabisa ngokusebenzisa abanye abantu ngale mifanekiso. Oku kubandakanya umdla wokubona isidlo esimnandi esinokuthi esinye isidlo sihlale phantsi sonwabe. Oku kube nefuthe elihle yi-Instagram kwishishini lokutya.
I-Instagram ibe nefuthe njani kushishino lokutya?
Kwiinyanga nje zakutshanje, ndiqalile ukubona indlela i-Instagram eye yakhona kushishino lokutya, ingaba kukupheka ekhaya, ukutya okanye ukuzama iindawo zokutyela ezintsha. Iifoto zabantu zingqine ukuba sisixhobo esikhethekileyo sonyuselo kuyo nantoni na enxulumene nokutya. Amaxesha amaninzi, kuye kwafuneka ndenze umngxunya wokuya kwiikhabhathi zasekhitshini ukwanelisa iminqweno yam emva kokubona enye yezi foto zimnandi. Abapheki abapheka besuka ekhaya okanye abantu abatyelele kwindawo yokutyela ethile banokuthatha iifoto ezikhawulezayo kwifowuni yabo kwaye bazithumele kwimithombo yeendaba zentlalo ezinje nge-Instagram ukuba ibonwe lihlabathi liphela. Ngenxa yoko, unokuvuselela umdla womnye umntu ngokuzama iresiphi, ngokundwendwela indawo yokutya, okanye unokuvula indlala yaloo mntu nakuphi na ukutya.
Izibonelelo zokusebenzisa i-Instagram kwishishini lokutya
Ndikwi-Instagram phantse unyaka kwaye ngeli xesha ndikonwabele kakhulu ukubona ubomi babahlobo kunye nosapho ngeefoto kunye neevidiyo ezimfutshane. Nangona kunjalo, ngeli xesha lexesha, eyona nto yayibambe iliso lam yayikukuzingca kwezi freaks zasekhitshini ngemiyalelo yokutya ababeyibekile okanye izidlo ababezilungisile. Ukutya yinto oyithandayo okanye isenzo esiza kuba yinxalenye yobomi bomntu wonke kwaye kutheni ungabelani ngeeresiphi zakho ozithandayo okanye amava okupheka kunye nehlabathi lezentlalo? Nabani na ofikelela kwi-Intanethi unokuthatha iifoto zezitya zabo zokutya, izitya eziphambili, iidessert okanye iziselo ezinxilisayo Baye bakwazi ukuzitya, bazilayishe kwi-Instagram kwaye, kwimizuzwana nje, eso sithombe simnandi siya kubonakala kumawakawaka abalandeli kwezinye zezona zixhobo zikhulu zonxibelelwano loluntu emhlabeni. Ngaphandle koko, kukho iiapps ezahlukeneyo eziza kuphucula ezi foto okanye uninzi lweefilitha eziza kwenza ukutya kunye nokusela into kujongeke ngakumbi. Nokuba ukutya okumnandi kakhulu kunokwenziwa kube nomtsalane kwezinye zezi nkqubela phambili kubuchwephesha. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukusetyenziswa kwe-Instagram kwishishini lokutya kube yinguqu.
Enye inzuzo yokusebenzisa i-Instagram izidlo kukuba esi sicelo sefoto sisebenza kunye nolunye usetyenziso olubizwa ngokuba ezilinganayo, evumela umsebenzisi Yabelana ngendawo yakho kwimephu nabalandeli bakhe. Abantu banako "ukungena" kwiindawo ezithile zokutya, izakhiwo, okanye ezinye iindawo ukuze abahlobo babo bazi ukuba benza ntoni. Ukusuka kule ntsebenziswano, ndibona i-Instagram njengesixhobo sokuthengisa esikhethekileyo, kungekuphela kuba abahamba iivenkile zokutyela kunye nokusetyenziswa kokutya banokuthatha iifoto ezinomtsalane zokutya neziselo zabo, kodwa banokuncamathisela indawo enayo loo foto, kuba uthini ukuba abanye abathathi-nxaxheba bayayifuna. ukuba namava emenyu efanayo emva koko bayazi ukuba bangayifumana phi. Nokuba i-Instagram ayithathwa njengenye yeendlela ezisebenzayo zemithombo yeendaba okwangoku, ndingacebisa usetyenziso lwasimahla kuye nawuphi na umpheki.
Kutheni i-Instagram isisixhobo esinamandla kumashishini okutya?
Kunyaka ophelileyo, le app ikhethekileyo enxulumene neefoto ngamanye amaxesha iye yangqineka iyinto yokundikhuthaza ngokubona impumelelo yabanye, indinceda ukuba ndithathe inxaxheba kubomi babantu endingababoni rhoqo, kwaye wazise ulwazi malunga nezinto ezithile ezinje ngeziganeko zasekuhlaleni okanye ulwazi lwesisa. Umzekelo, ndizifumene ndithetha izinto ezinje "kulungile bendingazi ukuba bakuphakile ukutya apho", okanye "wow, eso sicwangciso sokutya sisempilweni sihlawulelwe loo mntu" okanye mhlawumbi "dang, bendingazi ukuba" . Ibar ibinolo lonwabo lokwazisa apho kule veki iphelileyo! ”Kwaye ukubona iifoto zamava abo kwezi meko kundikhokelele ekubeni ndifune ukuzama izinto ezintsha, ukubandakanyeka ngakumbi okanye ndingaphoswa ngomnye umsitho ofanayo. Ngaba iya kuba yimvakalelo yokuba wonke umntu unazo ezi foto? Akunakulindeleka, kodwa njengesixhobo sasimahla nabani na anokusebenzisa, kutheni amaqela kunye namashishini engafuni ukusebenzisa i-Instagram njengendlela yokuthengisa? Ngokuqinisekileyo ayizukulimaza ishishini okanye iqela konke konke!
Iinketho zephoto zentengiso azinasiphelo kwaye yiyo loo nto ndingancoma ngokwenene ukuquka lo vimba kwisicwangciso sokuthengisa. Abanini bamashishini banokuthatha iifoto kwaye balayishe ngokusisiseko nayiphi na into enxulumene neshishini labookanye, njengabantu abonwabisayo besebenzisa iimveliso zabo, iimpendulo zabantu abazama ukutya okutsha, izinto ezizodwa okanye izaphulelo ezinikezelwa ixesha elithile, okanye iifoto nje zazo zonke izinto zemenyu ezahlukeneyo okanye imigca yemveliso ebaphathi kunye nabanini bafuna ukukhuthaza ngakumbi. Ngokoluvo lwam, i-Instagram ayisisixhobo sokuthengisa simahla njenge-Facebook kunye ne-Twitter, kodwa ndicinga ukuba inokuthi ifike kuloo ndawo, ngakumbi ngokulula apho aba basebenzisi banokudibanisa khona i-Instagram kunye nezinye iisayithi ezinkulu zonxibelelwano. kwezentlalo.
1 I-Instagram ibe nefuthe njani kushishino lokutya?
2 Izibonelelo zokusebenzisa i-Instagram kwishishini lokutya
3 Kutheni i-Instagram isisixhobo esinamandla kumashishini okutya?
Ufika njani kuluhlu lwe "zithandwa kakhulu" kwi-Instagram?
Iimpawu ze-Instagram: iingcebiso zokuphucula i-Instagram yakho